विशेष ‘चुनाव जितेर मतदाता नै बिर्सने नेतालाई टिकट नदिए हुन्न र ?’
Ujyaalo शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ ०६:३७:००
विष्णु विश्वकर्मा/उज्यालो ।
काठमाडौं, मंसिर १४ – ‘दुई चार जना कार्यकर्ता पछि लगाएर पार्टीका उम्मेदवार आउँछन् । मलाई भोट दिनु भन्छन्’ ललितपुरको खुमलटारस्थित ढोलाहिटीकी सरला महतले भन्नुभयो ‘काम नगर्ने, नागरिकका पीर मर्का नबुझ्ने नेतालाई यसपटक पनि कसरी भोट दिने ?’
मंसिर २१ गते दोश्रो चरणमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावको दिन नजिकिँदै गर्दा ललितपुरका मतदाता कसलाई भोट दिने भन्नेमै अलमलमा छन् । चुनावको मुखैमा मिठा मिठा आश्वासन जुनै उम्मेदवारले देखाउने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसैले नगर्ने भएपछि भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने अन्यौल ढोलाहिटीकी महतलाई जस्तै अरुलाई पनि छ ।
‘पञ्चायतदेखि भोट हाल्दै आएका छौँ । बहुदल आएपछि पनि भोट हाल्यौँ । तर हाम्रा लागि कुन नेताले के गरेका छन् र ? अहिले भोट हाल्नलाई । एक भोट हालौला जसलाई भएपनि । तर विकासको आश छैन् ।’ ललितपुर नखीपोटका केदार प्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो ।
हरेक दिन दलका उम्मेदवार भोट माग्न मतदाताको घरदैलो धाइरहेका छन् । तर आफूलाई भोट किन दिने भनेर मतदातालाई आश्वस्त पार्न कुनै उम्मेदवारले पनि सकिरहेका छैनन् ।
‘यतिका नेता छन् । तर कसैले यो सडकमा उडिरहेको धूलोमा पानी छम्किन सकेन’ नखीपोटकै राम सिग्देलले भन्नुभयो ‘उल्टै भोट माग्न आउँदा पनि धूलो उडाएरै आउँछन् । धूलो उडाएरै जान्छन् । तर ठोस योजना र काम यो गर्छु भन्न सक्दैनन् । अब भन्नुस, हामी कसलाई किन भोट हालौँ ?’
चुनाव :हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा !
उम्मेदवारले घरमै आएर मलाई भोट दिनुस भन्ने, टोल टोलमा चुनावको प्रचार प्रसार गर्ने, अनि विकासका मिठा सपना देखाउने भनेको मतदान हुने दिनसम्म मात्रै हो । अर्थात यसपटकका लागि मंसिर २१ गतेसम्म ।
त्यसपछि न उम्मेदवारले मतदाता चिन्छन् । न मतदाताले उम्मेदवार नै । विगतमा धेरैपटक यस्तो अवस्था भोगिसकेका ललितपुरका मतदाताले यसपटकको चुनावलाई पनि त्यसै भनेका छन् । अर्थात चुनाव भनेकै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हो ।
‘चुनावका दिनसम्म सडक बन्छ, ढल बन्छ, खानेपानी आउँछ, टोल सफा हुन्छ’ खुमलटार ढोलाहिटीकी महतले भन्नुभयो ‘तर चुनाव सकिएपछि सडक र ढल बन्नु त परै जाओस । आफैले भोट हालेको नेता पनि नागरिकको पीर मर्का बुझ्ने भई दिदैनन् ।’
आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेबारे सचेत भएपनि नेताहरुबाट आश गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ ।
पुरानै नेताबाट नयाँ के आश गर्नु ?
बर्षेनि चुनाव हुन्छ । केही ठाउँ बाहेक धेरै ठाउँमा पुरानै नेताले चुनाव लड्छन् । जित्छन् पनि । तर विकास भने फिटिक्कै गर्दैनन् । यसले मतदातामा निराशा मात्रै छाएको छ ।
ललितपुर जावालाखेलका प्रेम थापा प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘उही नेता उही नारा अनि भोट मात्रै हालेर नयाँ के हुन्छ ? यसरी पनि देशको विकास हुन्छ र ?’
चुनावी प्रचार प्रसारले ललितपुरका चोक, गल्ली र घरघर तताए पनि नागरिकको मन भने तात्न सकेको छैन । कारण हो, विगतका नेताहरुको मनोमानी प्रवृत्ति । अनि चुनाव जितेपछि नागरिक बिर्सने बानी ।
‘चुनाव जितेपछि भोट दिने हामी मतदातालाई बिर्सने नेतालाई पनि अब तिम्रो राजनीति भयो भन्दै अर्कोपटक टिकट नदिँदा हुन्न र ?’ पुराना र काम नगर्ने नेताबाट उन्मुक्ति पाउन ढोलाहिटीकी सरला महत सुझाव दिनुहुन्छ ‘एउटाले नगरे अर्को नेतालाई अवसर दिने पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक छ ।’
ललितपुरका ३ क्षेत्रमा मंसिर २१ गते हुने चुनावका लागि १ सय ३१ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । क्षेत्र नं. १ मा ५३, क्षेत्र नं. २ र ३ मा ३९÷३९ वटा मतदान केन्द्र छन् ।
ललितपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालमुकुन्द दवाडीका अुनसार ती सबै मतदान केन्द्रका लागि मतदान अधिकृत पनि तोकिसकिएको छ ।
मतदान अधिकृतलाई अहिले प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ । प्रशिक्षणपछि मंसिर १८ गतेसम्म उनीहरु मतदान केन्द्रमा पुगिसक्ने पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत दवाडीले बताउनुभयो ।